1 & 2 Layer PCB Abakhiqizi | I-China 1 & 2 Layer PCB Factory & Abahlinzeki
2 ungqimba wesifunda ibhodi yokukhiya nge-elekthronikhi
Leli yibhodi lesifunda lesendlalelo esi-2 se-smart home elekthronikhi. I-UL eqinisekisiwe i-ShengYi S1141 FR-4 tg130, ubukhulu bebhodi le-1.0mm, ukuqina kwe-1 OZ (35um) yethusi, ukucwiliswa kwegolide lokucwiliswa, imaskhi e-solder eluhlaza kanye nesikrini esimhlophe sikasilika. Njengoba kuyibhodi elincane, i-PCB elethwa yiphaneli 20 * 3 = 60 PCs iphaneli ngayinye. Uhlaka lwephrofayili yokusebenzisa isitembu imbobo nokubalwa kwe-CNC. Konke ukugcwaliswa kokukhiqiza ngemfuneko ye-RoHS.
2 ungqimba wesifunda ibhodi HASL Lead Mahhala qeda
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo esingu-2 lomkhiqizo ovuselelekayo. I-UL eqinisekisiwe i-ShengYi S1141 FR-4 tg130, i-1.6mm board thickness, i-1 OZ (35um) ukujiya kwethusi, i-HASL ihola isiphetho samahhala, imaskhi e-solder eluhlaza kanye nesikrini esimhlophe sikasilika. Ama-PC amathathu we-panel ngayinye nge-V-Cut yohlaka lokucubungula Konke ukugcwaliswa kokukhiqiza ngemfuneko ye-RoHS.
2 ungqimba wesifunda ibhodi elifakwe uhhafu wembobo we-PCB womkhiqizo weSensor
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo elingu-2 elinembobo engamamitha ayisigamu yomkhiqizo wenzwa. I-UL eqinisekisiwe i-Shengyi S1141, i-FR-4 tg130, i-1.6mm ukujiya, i-1.5 OZ (50um) ukujiya kwethusi, imaskhi e-solder eluhlaza kanye nesikrini esimhlophe sikasilika. Kukhona ikhodi ye-QR ku-PCB ongayikhomba. Konke ukugcwaliswa kokukhiqiza ngemfuneko ye-RoHS.
1 & 2 ungqimba PCB \_ RoHS imithetho 2 ungqimba FR4 PCB
Leli ibhodi lesifunda lesendlalelo elingu-2 elinokuphela kokucwiliswa kwegolide. Ukucaciswa kujwayelekile, ubukhulu be-FR4 tg130, 1.6mm, 1 OZ (35um) ukujiya kwethusi, imaskhi e-solder eluhlaza kanye nesikrini esimhlophe sikasilika. Njengoba kuyibhodi elincane, i-PCB elethwa yiphaneli 20 * 3 = 60 PCs iphaneli ngayinye. Uhlaka lwephrofayili yokusebenzisa isitembu imbobo nokubalwa kwe-CNC. Konke ukugcwaliswa kokukhiqiza ngemfuneko ye-RoHS.